Technology | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Huawei ndiye mutengesi mukuru we5G muRussia
Nyaya dzine chekuita nehondo yekutengeserana pakati peChina neUnited States, uko Huawei ari pakati pekukurukurirana, dzimwe nguva ane mamiriro anonakidza. Russia yakasarudza kuti chiChinese chichava mutengesi mukuru wezvivakwa zve5G. MuRussia ...
"20 muzana yadzoka," MTS. Terms, wongororo. Maitiro ekubatanidza "20 muzana inodzoka" MTS?
Zvirongwa zvakabatana uye kukwidziridzwa kwevanoshanda nharembozha ikozvino kuri kudiwa zvikuru. Ichokwadi, vanyoreri vanofarira kusarudza pakati pavo izvo zvinoita kunge zvinonyanya kubatsira. "20 muzana iri kudzoka," MTS is a stock, ...
Xiaomi Mi4 smartphone: ongororo uye yakatarwa
A yakanaka uye inobereka premium smartphone ndeye Xiaomi Mi4. Ongororo pamusoro peiyi mudziyo wekutengesa, software yayo uye zvinhu zvinorembera, pamwe nezvimiro zvicharondedzerwa zvakadzama gare gare mune izvo zvinyorwa. Equipment Zvakwana ...
Mifananidzo yemadhijitari: kuongororwa, mutengo, ongororo uye chiyero
Zvigadzirwa zvemazuva ano hazviregi kushamisa vatengi. Zuva rega rega pane zvigadzirwa zvitsva zvinongoerekana zvave zvakafanira uye izvo munhu wese anoda kutenga. Saka zvakaitika nemifananidzo yemafoto. Kusarudzwa kwavo kwakanyanya zvekuti ...
Alexander Bell: biography uye zvigadzirwa zvake (mufananidzo)
Alexander Graham Bell akaberekerwa muElinburgh (Scotland) pa3 musi waKurume 1847 yegore. Rudzi rwekunakirwa kweiyi American sainzi uye mugadziri aive asina kujairika zvisina kujairika. Mukuedza kwake kunoshamisa, akakwanisa kusanganisa art uye ...
Iyo sensor haina kupindura kubata - chii chandinofanira kuita? Bata skrini
Machira emazuva ano ave chikamu chehupenyu hwedu. Runhare runonyanya kuzivikanwa. Anenge munhu wese anazvo. Nehurombo, kunyange mafoni akavimbika zvakanyanya anogona kuputsa nekuda kwekuvhunduka, mvura kana ...
Chii chinonzi girafu yemifananidzo? Ongororo yemhando dzakanakisa
Tekinoroji yaenda kumberi, uye zvino vazhinji vagadziri uye vatori vemifananidzo vanogona kufema shuwa. Ehe, chishandiso ichi chinogona kushandiswa kwete chete nevanhu vanobatana nekutenda. Kune avo vari nyore kwazvo kushandisa ...
Samsung Alpha: smartphone maficha uye kuongorora. Samsung Galaxy Alpha
Iko kusakanganisika kusanganisa kweiyo muviri mudiki uye yakakwira yekuita kweSmartphone ndeye Samsung Alpha. Hunhu hwechishandiso ichi pane software uye huwandu hwemaharaji anotendera nhasi kuti agadzirise matambudziko chero akaomarara ..
Maitiro ekuisa ipa mafaira pane iphone?
Kuti ugokwanisa kuisa ipa mafaera pane iyo iPhone, hapana chakakosha chinodiwa. Anenge chero mushandisi anogona kuita izvi ari ega. Munyaya ino tinofunga nezve yakadzama maitiro uye tidzidze maitiro ekuisa ipa-application ..
DIY inopenya miti
Iko kuda kushongedza imba yako kana furati inozivikanwa kune vese varidzi vanofara vezvivakwa, pamwe nevaya vanofanirwa kugara mukamuri rakabvarurwa. Vagadziri vemazuva ano vakasiyana-siyana ekushongedza accessories accessories vanomhanya nekukasira ...
Zvimiro uye zvakavanzika mabasa e "Android"
Android yakanaka yekushandisa system yea Smartphones, mahwendefa kana e-mabhuku. Uchishandisa iyo inoshanda sisitimu, iwe unogona kudzora chako mudziyo. Kudzoka kumashure kwe2005 gore, Google yakawana kodzero dze ...
4G LTE - chii icho? Yota 4G LTE Modem
Tekinoroji dzeInternet hadzimira mira - ichi ichokwadi. Chokwadi vazhinji vedu takanzwa nezveiyo nharembozha yekutaurirana se3G. Zvimwe mumwe wedu ari parunhare izvozvi kana ...
Reusable Pregnancy Tied - Imwe Yakabudirira Nhanho muDhijitari Technology
Vakadzi vazhinji vanoda nekukurumidza uye nekuvimbika kuti vazive nezve zvavanofungidzirwa kuti vane nhumbu, saka vanoenda kumafesi uye vanotenga zviyedzo zvakati wandei panguva imwe chete. Kune zvikonzero zvakawanda zveichi: ivo havaoneki kana vakaipa ...
Countertop yakavakirwa-mumashini ekushambidza (foto)
Mumamiriro ezvinhu edzimba diki-rakakura, kusagadzikana kunobuda maererano nekuiswa kwemidziyo yemumba. Ndokusaka dhizaini yemakishi yekubheka inosanganisira zvinhu zvakasiyana siyana zvisina kushandiswa pakubika. Kunyanya, kugeza ...
Nokia S7: mafoni maficha uye ongororo
"Nokia С7 00", maitiro ayo anozokurukurwa mune ino chinyorwa, anongodaidzwa se "Nokia С7" nevashandisi. Iyi smartphone inopihwa nzvimbo yakakosha mumutsara weNokia vifaa. Muchokwadi, iyi ndiyo yechipiri smartphone ...
Runhare "Nokia Lumiya 530": ongororo, yakatarwa
Nhare dzeNokia Lumia ndedzimwe dzakakurumbira muRussia. Fans yemagetsi mafoni kubva kuRussian Federation anoremekedza Finnish (nguva pfupi yapfuura - de jure American - muchinyatso chiitiko chinozivikanwa ...
MTS 982 smartphone: ongororo, muridzi wongororo uye tsanangudzo dzefoni
Mu2014, maererano neyakagara ratodiwa nevazhinji vashandisi, zvaigoneka kutenga touchscreen smartphone kubva kune anoshanda nemutengo unokwezva. Panguva ino isu takapihwa iyo MTS 982 modhi. Mari yayo ...
"Nokia Х6": yakatarwa, mirayiridzo, mapikicha
Kugara munyika yemazuva ano, zvakaoma kuti uzvifungidzire usina chinhu chakatsiga izvozvi ser mbozhanhare. Tinomuda iye kubasa, kudzidza, kutaurirana nevadikani, uye kungozorora ..
Mabhonasi ekubhadhara "Maita basa" kubva kuSberbank MTS. Kubhadhara sei ne "Ndatenda" mabhonasi kubva kuSberbank MTS?
Parizvino, sangano reMTS rinoshanda pamwe nemahofisi mazhinji, rimwe rawo ndiSberbank. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ivo vane nhamba yakakura yevanozivikanwa masevhisi, semuenzaniso, "Kubhadhara neMTS nemabhonasi," Ndatenda kubva ...
Fly 4416 foni - yakatarwa
Fly nhare mbozhanhare dzemhando hadziwanzo kupfuura dzimwe mimwe michina inokwikwidza, asi zvakare ine zvakawanda zvakanaka. Iyo chete inodzosera yeiyi modhi renji ndeye mutauri akanyarara. Nekudaro, izvi zvinoenderana chete ...
peji 1 peji 2 ... peji 37 Next Page
Mibvunzo ye16 mu database yakagadzirwa mu 0,600 masekondi.